Ihe nchekwa data TSA: Inye nzuzo mgbe ị na-efe efe ikuku US
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » News » Ihe nchekwa data TSA: Inye nzuzo mgbe ị na-efe efe ikuku US
Ọ gaghị abụrụ ọtụtụ ihe ijuanya, mana onye nta akụkọ New York Times Susan Stellin kpughere n'izu a na TSA nwere ohere ịnweta nnukwu ọdụ data - ma nke gọọmentị etiti ma nke nzuzo - wh
Ọ gaghị abụrụ ọtụtụ ihe ijuanya, mana onye nta akụkọ New York Times bụ Susan Stellin kpughere n'izu a na TSA nwere ohere ịnweta nnukwu ọdụ data - ma na gọọmentị etiti na nke nzuzo - nke ọ na-eji iji debe ozi gbasara ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye ọ bụla na-eme njem site na ọdụ ụgbọ elu ndị America.
Dabere na ederede ihu akwụkwọ na mbipụta Tuesday nke New York Times, United States Security Transportation Administration (TSA) na-amụta ọtụtụ ihe banyere ndị njem ụgbọ elu karịa naanị nri ha chọrọ.
Nọmba njirimara ụtụ isi, atụmatụ njem ochie, ndekọ ihe onwunwe na ọbụlagodi njirimara anụ ahụ dị na ọdụ data ndị a, Stellin dere, nke a na-ekekọrịta n'etiti ụlọ ọrụ gọọmentị ma jikọtara ya na ozi ndị ọzọ na ndekọ ebe ọzọ, gụnyere ọgụgụ isi nke ndị na-akwụ ụgwọ ụgwọ na ụlọ ọrụ ndị ọzọ dị iche iche nke uru ha dabere na igwupụta ozi nkeonwe.
Ngalaba nke Homeland Security ụlọ ọrụ dị ka TSA na-eji nchịkọta data a dị ka TSA dịka ngwa ọrụ iji nyochaa ndị na-eyi ọha egwu na ndị omempụ ndị ọzọ, ma nwee ike inye aka na ebumnuche nke ụlọ ọrụ na-ewepụ oge nke usoro nchekwa nchekwa dị ogologo ugbu a. na ebe ọdụ ụgbọelu na mba ahụ. Mana ka ndị nnọchi anya sitere na TSA wepụtara mgbalị ndị a na Times dị ka ihe dị mkpa iji hụ na nchekwa zuru oke, ndị na-akwado nzuzo na-arịọ maka mgbanwe.
Dabere na Stellin, TSA ugbu a abụghị naanị na-eduzi usoro ndabere na nyocha ndị omekome na ndị na-ejide tiketi ụgbọ elu, kamakwa ịdabere na ọdụ data ndị a iji mata akara uhie ọ bụla. Na kọmputa - ọ bụghị ụmụ mmadụ - na-akpọ oku, ọ bụ ezie, ọ nwere ike ịgbanwe ihu nke njem gaa otu ebe onye ọ bụla na ihe niile na-enyo enyo, ruo mgbe usoro ahụ na-eme ka ha hụ ụzọ ọzọ.
"Echere m na ụzọ kachasị mma iji lelee ya bụ dị ka nyocha tupu mpụ oge ọ bụla ị na-efe efe," onye ndụmọdụ Project Identity Edward Hasbrouck gwara Times. “Ndabara ga-kasị elu, kasị intrusive larịị nke search, na ihe ọ bụla na-erughị ga-oyi na-enye ụfọdụ ndị ọzọ ozi na ụfọdụ ejiji.”
Hasbrouck agbaala gọọmentị etiti akwụkwọ na mbọ iji mụta banyere ozi ndị ụlọ ọrụ dịka TSA na-achịkọta ndị njem America, ma na-ekwusi ike ogologo oge na a na-achịkọta ihe karịrị anya.
Na mbido ọnwa a, Hasbrouck kwuru na weebụsaịtị Identity Project nke weghaara akwụkwọ nchekwa nke onye ọrụ ngo ọgụgụ isi mbụ Edward Snowden wepụtara na mgbasa ozi gosipụtara na gọọmentị US na-achịkọta ozi site na sistemụ nchekwa ụgbọelu na saịtị mgbasa ozi na-elekọta mmadụ iji nweta ozi gbasara ndị njem, ma n'ime ụlọ. na ná mba ọzọ.
Ikwu okwu na SF kwa izu na 2010, Hasbrouck kwuru na akpaghị aka ezubere iche usoro malitere na 2006 site na ụlọ ọrụ DHS ọzọ, Customs and Border Protection, dịka "igwe na-emejọ" nke nwere ike ime ka onye njem ọ bụla yie enyo ebe ọ dabere na ozi agbakọtara a “nchekwa data nke zuru ezu profaịlụ nke onye ọ bụla ga-agafe US ókè.”
Ọbụna n'oge ahụ, Hasbrouck kwuru na gọọmentị nwere ohere iji nweta ihe ederede ahaziri iche nke nwere nkọwa ndị ọzọ gbasara ndị njem karịa otu nwere ike iche. "Ahụla m na faịlụ otu onye na-egosi ọ bụghị naanị ndị ha na ha na-eme njem, mana… ma ha rịọrọ maka otu akwa ma ọ bụ abụọ n'ime ụlọ nkwari akụ, n'ihi na etinyere ụlọ nkwari akụ ha site n'otu ndoputa dị ka ụgbọ elu ha," Hasbrouck gwara nke SF kwa izu. Echeghị m na ọ bụ ihe kwesịrị ekwesị na onye ọ bụla ga-ele anya n’azụ ụlọ ime ụlọ na họtel gị ma hụ onye ya na ya na-ehi ụra. ”
Dabere na akụkọ nke izu a Times gara ihe karịrị afọ atọ mgbe nke ahụ gasịrị, ozi a na-anakọta site na TSA na-agbasawanye, ndị ụlọ ọrụ gọọmentị ndị ọzọ nwekwara ike itinye aka na ya.
“Dịka ọmụmaatụ,” Stellin dere, “mmelite banyere sistemụ nchekwa nchekwa njem njem TSA, nke nwere ozi gbasara ndị njem ebubo nke 'imebi iwu ma ọ bụ mmebi iwu' nke iwu nchekwa, dọrọ aka na ntị na enwere ike ịkekọrịta ihe ndekọ ahụ na 'ụlọ ọrụ nchịkọta ụgwọ. iji nweta ụgwọ. '”
“Nkwupụta nzuzo nzuzo banyere PreCheck na-ekwu na mkpịsị aka mkpịsị aka nke ndị mmadụ tinyere maka mmemme ahụ ga-eji ndị FBI nyocha maka nchekwa data mpụ ha adịghị edozi,” ka o kwuru banyere usoro nyocha ọhụụ ọhụrụ nke TSA wepụtara na ọdụ ụgbọelu gafee US. tupu ọnwa a.
Na Identity Project na ebe nrụọrụ weebụ, Hasbrouck dere na otu usoro ikike TSA ka “mepụta ọhụụ ọhụrụ na-adịgide adịgide na ihe niile site na mkpịsị aka gị ruo 'ozi ọ bụla ọzọ enyere. . . site n'aka ụlọ ọrụ gọọmenti ma ọ bụ ụlọ ọrụ ndị ọzọ. ”
Di na Nwunye na ihe omuma a tinyere akwukwo Snowden nke na-egosi na NSA n’onwe ha na-enweta ihe ndekọ ndi njem nke ndi ụgbọ elu nke onwe ha na - enyefe ha n’aka DHS - yana “ngwa nyocha tupu mpụ” nke Hasbrouck kọwara bụ nke kariri ike.